गाउँपालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न पाउनु पर्छ | Aaja ko Shiksha
गाउँपालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न पाउनु पर्छ
राजकुमार मल्ल, अध्यक्ष, राक्सीराङ गाउँपालिका, मकवानपुर
राजकुमार मल्ल, मकवानपुर जिल्लास्थित राक्सीराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बाल्यकाल यहीको अठारेमा रहेको स्कूलमा कक्षा ७ सम्म पढेपछि हेटौडामा गई अरुको घरमा काम गर्दै उहाँले एसएलसीसम्म अध्ययन पूरा गर्नुभयो । मकवानपुरको दुर्गम ठाउँमा पर्ने यस गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको जनसंख्या ५५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ४५ प्रतिशत तामाङ र अन्य ५ प्रतिशत रहेका छन् । आफ्नो गाउँपालिका शैक्षिक स्थितिमा निकै पछि परेको महशूस गर्नुभएका अध्यक्ष मल्लसँग सुधारका केही महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम रहेका छन् । रिपोर्टिङका क्रममा गत साता राक्सीराङ पुग्नुभएका आजको शिक्षा साप्ताहिकका सम्पादक सुदर्शन सिग्देलले अध्यक्ष मल्लसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्ने मौका पाउनुभयो । प्रस्तुत छ, सो कुराकानी ।
चेपाङ समुदाय बाहुल्य रहेको तपाईँको गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
राक्सीराङ गाउँपालिकालाई मकवानपुरको ‘कर्णाली’ भने हुन्छ । अहिले अलि–अलि ब्यूँतिन लागे जस्तै छ । अन्त टिक्न नसकेपछि बल्ल यहाँ शिक्षक पठाइन्छन् । पर्याप्त दरबन्दी पनि छैन । काठ बेचेर मास्टरको तलब खुवाउनु परेको छ । मावि पढ्न ६ घण्टा र निमावि पुग्न १२ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा कि बीच बाटैमा कि त विद्यालयमै बास बस्नुपर्ने हुन्छ । जनताको जीवनस्तर पनि ज्यादै गरिबीमा छ । ३ देखि ६ महिना मात्र खाना पुग्ने जनता छन् । चेपाङ समुदायका अभिभावक सिस्नु, साग, गिठ्ठा, भ्याकुर खोज्न वन जान्छन् । कोही माछा मार्न खोलामै दिन बिताउँछन् । यस्तो काम गर्दा ढुङ्गा उचाल्नु पर्छ । अनि खान्की पनि बढी नै चाहिन्छ । उत्पादनको तुलनामा खाना पुग्दैन । अर्काे कुरा, विद्यार्थी अभिभावकबिहीन बनेका छन् । विद्यालय भर्ना भएकाले पनि बीचैमा पढाइ छोड्ने गर्छन् ।
अभिभावकबिहीनचाहिँ कसरी ?
जबान उमेरका अभिभावक जेलमा छन् । गाउँबाट गाजा ओसारपसार गरेको अभियोगमा युवाहरु जेलमा परेका छन् । भिमफेदी कारागारमा अझै दुई सयभन्दा बढी युवा यही अभियोगमा थुनिएका छन् । विवाह गरेपछि बालबच्चा भए तर बेरोजगारै बस्नु पर्यो । भारतदेखि आएका गाजा तस्करले यस्ता युवालाई पैसाको लालच देखाएर ओसारपसारमा संलग्न गराउँदा रहेछन् । परिबन्दमा परी ६५ वर्षका वृद्धले पनि यतिबेला मुद्दा खेपिरहेको अवस्था छ । ठूलो संख्यामा युवा पक्राऊ परेपछि बालबालिका अभिभावकबिहीन बन्न पुगेका छन् । पारिवारिक समस्याका कारण विद्यालय आउन उनीहरु सकिरहेका छैनन् ।
गाजा तस्करमै युवाहरु कसरी फसे त ?
मकवानपुरको यो क्षेत्र गाजा प्रभावित स्थान हो । मूल कुरा, यातायातको असुविधा यसको कारण हो । तलबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र माथि बाइरोडको बाटो भएपनि यो बीच भागलाई कहिल्यै मोटर बाटोले छोएन । गाउँपालिकाका जमिन तरकारी खेतीका निम्ति अति उर्बर छ । काउली, च्यूरी र महका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो यो । तर के गर्नु ? बजार छैन । यातायात नहुँदा किसान निराश छन् । अनि पैसा कमाउन युवाहरु कुबाटोमा फसेको देखिन्छ ।
शिक्षा र यातायातको समस्या भन्नुभयो, समाधानका लागि गाउँपालिका के गरिरहेको छ ?
हामी २० वर्षदेखि मोटरबाटो अभियानमा छौं । ‘मोटरबाटो पुर्याइदेउ, शिक्षा देऊ, गाजा लाउँदैनौं’ भन्ने अभियान छ । यतिबेला गाउँपालिकाको प्रयासमा ५५ लाख रुपैयाँमा मनहरि–चैनपुर ६ किमि मोटरबाटो बन्दैछ । त्यस्तै, चैनपुर–खैराङ गरी जम्मा २९ किमि मोटरबाटो बन्ने क्रममा छ । जम्मा ५० किमिमा मलेखुसँग यहाँको बाटो जोडिन्छ ।
टाढाबाट माध्यमिक शिक्षा पढ्न आउनेका लागि सिलिङ्गे र खैराङमा छात्राबास बनाउने योजनामा छौं । सूर्याेदय माविलाई प्राविधिक शिक्षालय बनाउने कार्यक्रम छ । यसो भयो भने कोही जेटिए बन्लान्, कोही राम्रो कृषक त कोहीचाहिँ कृषि प्राविधिज्ञ बन्न सक्लान् । गाउँपालिकाका युवालार्ई बेरोजागार हुन नदिने हाम्रो लक्ष्य हो ।
शिक्षा सुधारका लागि गाउँपालिका तत्काल के गर्दैछ ?
पहिला त समग्र गाउँपालिकाकै पढ्न नपाउने बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गर्नेछौं । त्यसपछि एउटा क्याम्प नै खडा गरी ती बालबालिकालाई पढाउने कार्यक्रम लागू गरिनेछ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, हामी शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न तयार छौं । शिक्षक दरबन्दी मिलान गाउँपालिकाले गर्न पाउनु पर्छ । यसका लागि केन्द्र बाधक बन्नु हुँदैन । हुन त, यो स्थानीय तहले नै गर्न पाउने हो तर अहिले नपाउने भनी विभिन्न बाधा खडा गरिएका छन् । हामीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने हो । ‘ज्ञानकेन्द्र’ र ‘ध्यानकेन्द्र’का नाममा शिक्षक वा शिक्षाका कर्मचारी केन्द्रमै बसिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यता आउनै मान्दैनन् । पहुँचका भरमा उतै अडिएका छन् । हामीकहाँ गाउँपालिकास्तरको ‘स्थानीय शिक्षा ऐन २०७४’ जारी भइसकेको छ । गाउँपालिकाको स्पष्ट योजना र कार्यक्रम छन् । यो अनुसार काम बढाउँदा हामी हाम्रो सुधारको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।